ချင်းမို င် တွင် တ ရုတ်အမျိုး သမီးတစ်ဦး သေ ဆုံး… – Shwewiki.com
ထို င်းမြောက်ပိုင်း၊ ချင်းမိုင်ခရိုင်၊ မဲ့လိမ်းမြို့နယ်ထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံက လာတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည် အမျိုးသမီးတဦး ဒီကနေ့မနက်က ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားပါတယ်။
မ ယ့်လိမ်းမြို့နယ်၊ မဲ့လိုမ်းရပ်ကွက်ရှိ ဥယျာဉ်ဟိုတယ် (Resort) တခုမှာ တရုတ်ပြည်က လာတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည် ၁ ဦး ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားကြောင်း ဒီမနက် ၁၁ နာရီ လောက်က အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းကနေ သတင်းရလို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူ ကူးစက်ရောဂါက ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ မဲ့လိမ်းမြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး မာနွတ် ဆွတ်ဆဝဒီက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ် … ။
အဆိုပါဧည့်သည်မှာ အသက် ၃၂ နှစ်ရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီး မနေ့ကမှ တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်း ကွမ်ကျိုးမြို့ကနေ ချင်းမိုင်ကို ရောက်ရှိလာကြောင်း ဒီမနက်မှာတော့ သူ တည်းခိုရာ ပန်းခြံဟိုတယ် (Resort) ထဲမှာပဲ သေဆုံးခဲ့တာလို့ စခန်းမှူးက ဆက်ပြောပါတယ် … ။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးရဲ့ ခရီးသွားဖော်က သူနဲ့အတူ ကွမ်ကျိုးကနေ ၅ ယောက် ခရီးတူတူ ထွက်ခွာလာကြောင်း၊ သေဆုံးသူမှာ ဒီမတိုင်ခင်က ဘာရောဂါမှမရှိသလို ကိုယ်ပူခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာစေးခြင်းတွေ တစုံတရာ မရှိကြောင်း၊ မနေ့ညကတော့ အရက်သောက်တာ နည်းနည်းများပြီး ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ အိပ်ရာဝင်ကာ ဒီနေ့မနက်မှာတော့ သူ့အခန်းထဲမှာပဲ သေဆုံးနေတာလို့ ဆိုပါတယ် … ။
သူရဲ့အလောင်းကို နခွန်းဖိင်းဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်သွားပြီး ဆရာဝန်တွေက စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုခဲ့ပါတယ် ။အဲဒီနောက် ခရိုင်ကျန်းမာရေးဌာနက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ ကျဒူးချိုင် မဏီလတ်က တရုတ်ခရီးသည်အမျိုးသမီးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါလက္ခဏာ မရှိတာကြောင့် အဆိုပါရောဂါနဲ့ သေဆုံးတာမဟုတ်ကြောင်း ဒီကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာပဲ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် …. ။
ဒါပေမဲ့ သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ ဆက်လက်ရှာဖွေစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ချင်းမိုင်မှာ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရှိပြီး တရုတ်ခရီးသွားတွေ အများအပြား လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိတဲ့ မြို့တမြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ် … ။
ထိုင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၄ ဦးထိ တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် ကနေ့ထိ နိုင်ငံ့ ဝင်ပေါက်ပိတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဝင်လာသမျှ ဧည့်သည်တွေ လက်ခံနေလို့ ထိုင်းအစိုးရဟာ ဝေဖန်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
ကိုးကား – ချန်နယ်လ် ၃ ထိုင်းတီဗွီသတင်း ၊ cm 108 Chiang Mai News DVB TV News
ထို ငျးမွောကျပိုငျး၊ ခငျြးမိုငျခရိုငျ၊ မဲ့လိမျးမွို့နယျထဲမှာ တရုတျနိုငျငံက လာတဲ့ ခရီးသှားဧညျ့သညျ အမြိုးသမီးတဦး ဒီကနမေ့နကျက ရုတျတရကျ သဆေုံးသှားပါတယျ။
မ ယျ့လိမျးမွို့နယျ၊ မဲ့လိုမျးရပျကှကျရှိ ဥယြာဉျဟိုတယျ (Resort) တခုမှာ တရုတျပွညျက လာတဲ့ ခရီးသှားဧညျ့သညျ ၁ ဦး ရုတျတရကျ သဆေုံးသှားကွောငျး ဒီမနကျ ၁၁ နာရီ လောကျက အရေးပျေါဖုနျးလိုငျးကနေ သတငျးရလို့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှနေဲ့အတူ ကူးစကျရောဂါက ကာကှယျရေးဝတျစုံတှေ ဝတျဆငျပွီး သှားရောကျစဈဆေးခဲ့တယျလို့ မဲ့လိမျးမွို့နယျ ရဲစခနျးမှူး မာနှတျ ဆှတျဆဝဒီက သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ … ။
အဆိုပါဧညျ့သညျမှာ အသကျ ၃၂ နှဈရှယျရှိ အမြိုးသမီးတဦးဖွဈပွီး မနကေ့မှ တရုတျပွညျအလယျပိုငျး ကှမျကြိုးမွို့ကနေ ခငျြးမိုငျကို ရောကျရှိလာကွောငျး ဒီမနကျမှာတော့ သူ တညျးခိုရာ ပနျးခွံဟိုတယျ (Resort) ထဲမှာပဲ သဆေုံးခဲ့တာလို့ စခနျးမှူးက ဆကျပွောပါတယျ … ။
အဆိုပါ အမြိုးသမီးရဲ့ ခရီးသှားဖျောက သူနဲ့အတူ ကှမျကြိုးကနေ ၅ ယောကျ ခရီးတူတူ ထှကျခှာလာကွောငျး၊ သဆေုံးသူမှာ ဒီမတိုငျခငျက ဘာရောဂါမှမရှိသလို ကိုယျပူခွငျး၊ ခြောငျးဆိုးခွငျး၊ နှာစေးခွငျးတှေ တစုံတရာ မရှိကွောငျး၊ မနညေ့ကတော့ အရကျသောကျတာ နညျးနညျးမြားပွီး ည ၁၀ နာရီလောကျမှာ အိပျရာဝငျကာ ဒီနမေ့နကျမှာတော့ သူ့အခနျးထဲမှာပဲ သဆေုံးနတောလို့ ဆိုပါတယျ … ။
သူရဲ့အလောငျးကို နခှနျးဖိငျးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျသှားပွီး ဆရာဝနျတှကေ စဈဆေးမှုတှေ ပွုခဲ့ပါတယျ ။အဲဒီနောကျ ခရိုငျကနျြးမာရေးဌာနက ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒေါကျတာ ကဒြူးခြိုငျ မဏီလတျက တရုတျခရီးသညျအမြိုးသမီးဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ရောဂါလက်ခဏာ မရှိတာကွောငျ့ အဆိုပါရောဂါနဲ့ သဆေုံးတာမဟုတျကွောငျး ဒီကနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးမှာပဲ ထုတျပွနျပွောဆိုလိုကျပါတယျ …. ။
ဒါပမေဲ့ သဆေုံးရတဲ့အကွောငျးရငျးကိုတော့ ဆကျလကျရှာဖှစေဈဆေးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ခငျြးမိုငျမှာ နိုငျငံတကာလဆေိပျရှိပွီး တရုတျခရီးသှားတှေ အမြားအပွား လာရောကျလညျပတျလရှေိ့တဲ့ မွို့တမွို့လညျး ဖွဈပါတယျ … ။
ထိုငျးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ ၁၄ ဦးထိ တှရှေိ့ခဲ့ပမေယျ့ ကနထေိ့ နိုငျငံ့ ဝငျပေါကျပိတျခွငျးမရှိဘဲ ဝငျလာသမြှ ဧညျ့သညျတှေ လကျခံနလေို့ ထိုငျးအစိုးရဟာ ဝဖေနျခံနရေတာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
ကိုးကား – ခနျြနယျလျ ၃ ထိုငျးတီဗှီသတငျး ၊ cm 108 Chiang Mai News DVB TV News
ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် ရှင်သာ မဏေများ ကိုရာသက်ပန် အခ မဲ့စီးခွင့်ပြုထားသည့် အင်းေ တ်ာကြီး-မန္တလေး express ကား